ဗဟုသုတတိုးပွားစေမည့် ဘာသာခြား စာအုပ်စာတမ်းများကို ဘာသာပြန်ရန်၊ မြန်မာမှုအရပ်ရပ်ကို စူးစမ်းရှာဖွေရန်နှင့် ၎င်းတို့၏အား ပုံနှိပ်ဖြန့်ချိရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဖွဲ့ထားသော အသင်း
စာပေဗိမာန် ဖွဲ့စည်းပုံတွင် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနတို့ အပြင် အဓိက လုပ်ငန်းကြီးများ ဖြစ်ကြသော စာတည်းဌာနများ၊ မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေရေးဌာန၊ စွယ်စုံကျမ်း ပြုစုရေးဌာန၊ ကျောင်းသုံးစာအုပ် ထုတ်လုပ်ရေး ဌာန၊ သုတေသန ဌာန၊ ရုံးပြင်လုပ်ငန်း ဌာန၊ စာကြည့်တိုက် ဟူ၍ ဌာနများ ပါဝင်သည်။စာတည်း ဌာနမှာလည်း အထွေထွေ ဝိဇ္ဇာဌာနနှင့် သိပ္ပံဌာန ဟူ၍ ရှိသည်။ အထွေထွေ ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံ ဌာန အကြီးအကဲမှာ စာတည်း ဦးမြတ်စိုး B.Sc. (Hons.) ဖြစ်သည်။ စွယ်စုံကျမ်း ပြုစုရေး ဌာန အကြီးအကဲ စာတည်း ဦးဒိုး (မဟာဝိဇ္ဇာ) ဖြစ်သည်။ စာပေဗိမာန် မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေရေးဌာန အကြီးအကဲမှာ စာတည်း ဦးတင်မောင် (တက္ကသိုလ်ထင်ကြီး) ဖြစ်သည်။ သုတေသနဌာန အကြီးအကဲမှာ ဗိုလ်ဗကို B.A. (Hons.) B.L., M.A. (Yale) ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ဗကိုသည် ၁၉၅၅ ခုနှစ်လောက်က ရုပ်ရှင်မင်းသား မဖြစ်သေး။ ရုပ်ရှင်နယ်၌ ခြေချရန် ပြင်ဆင်နေသည်ကို ယူဆရသည်။ ရုံးလုပ်ငန်း အရာရှိမှာ ဦးတင် (ဒဂုန်ရွှေမျှား) ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်ဦးတွင် ဂျပ်ဆင်ကောလိပ်ဝင်းအတွင်းရှိ အိမ်တစ်ဆောင်ကို အသင်းတိုက်အဖြစ် ယာယီ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးလျှင် ဒုတိယ စာတည်းမှူးတစ်ဦး၊ စာတည်းနှစ်ဦး၊ လက်ထောက် စာတည်းခြောက်ဦး၊ စာပြု ၂၄ ဦးတို့ဖြင့် စာပြုလုပ်ငန်း၊ စာတည်း လုပ်ငန်းတို့ကို စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့လေသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် မေလတွင် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းပေါ်ရှိ ဆိုရန်တိုဗီလာ အဆောက်အအုံသို့ အသင်းတိုက်ကို ရွှေ့ပြောင်းခဲ့လေသည်။ ဆိုရန်တိုဗီလာ အမည်ကိုလည်း စာပေဗိမာန်ဟူ၍ မှည့်ခေါ် ခဲ့သည်။ အမှောင်ခွင်း၍ အလင်းဆောင်အံ့ဟူသော အသင်းဆောင်ပုဒ်ကိုလည်း သတ်မှတ်ခဲ့ကြလေသည်။ ထိုအချိန်က မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန် စာပေအသင်း၌ပြုစု တည်းဖြတ်မှု လုပ်ငန်းများအဖြစ် လူထုအလင်းစာစဉ် လုပ်ငန်း၊ လူထုအိတ်ဆောင် စာစဉ် လုပ်ငန်း၊ လူထုတက္ကသိုလ်စာစဉ် လုပ်ငန်းဟူ၍ လုပ်ငန်းသုံးရပ်ကိုသာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ လေသည်။ လူထုအလင်းစာစဉ် လုပ်ငန်းမှာ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အရပ်ရပ်၊ ကမ္ဘာ့စာပေ ဗဟုသုတ အဖုံဖုံတို့ကို မြန်မာစာ ဖတ်တတ်သူတိုင်း ရယူနိုင်ရန် လွယ်ကူ ရှင်းလင်းစွာ မြန်မာပြန်ဆိုပြုစု ရေးသားရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ လူထုအိတ်ဆောင် စာစဉ်လုပ်ငန်းမှာ လောလောဆယ် ပေါ်ပေါက်နေသည့် မြန်မာ့အခြေအနေ၊ ကမ္ဘာ့ အခြေအနေတို့ကို ပြည်သူ လူထုအဖို့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ရန် အရေးပေါ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ အဆင့်ဆင့် ပြင်ဆင်ပြီးသော စာမူနှင့် ရုပ်ပုံဓာတ်ပုံတို့ကို ဗိလတ်ရှိ ဟေဇယ်ဝပ်ဆင် ဗိုင်းနေလီမိတက် ပုံနှိပ် တိုက်သို့ပို့၍ ပုံနှိပ်ခြင်း ကိစ္စကိုလည်း စွယ်စုံဌာနခွဲက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရသည်။မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းကို ကအကြောင်းရပ်မှ အကြောင်းကြောင်းအရပ်အထိ ကျမ်းအတွဲ ၁၄ တွဲ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန် ခန့်မှန်းထားလေသည်။ ယခုအထိ စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ ၁ (၁၉၅၄)၊ အတွဲ ၂ (၁၉၅၅)၊ အတွဲ ၃ (၁၉၅၆)၊ အတွဲ ၄ (၁၉၆ဝ)နှင့် အတွဲ ၅ (၁၉၆၁)တို့ကို ဗိလတ်တွင် ပုံနှိပ်၍ ပြည်သူလူထု လက်သို့ ဖြန့်ချိထုတ်ဝေခဲ့ပြီးလျှင် အတွဲ ၆ (၁၉၆၂)၊ အတွဲ ၇ (၁၉၆၃)၊ အတွဲ ၈ (၁၉၆၃)၊ အတွဲ ၉ (၁၉၆၄)နှင့် ဤအတွဲ ၁ဝ တို့ကို မြန်မာနိုင်ငံ (စာပေဗိမာန် ပုံနှိပ်တိုက်)၌ ပုံနှိပ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ကျန်အတွဲများကို ဆက်တိုက် ထုတ်ဝေသွားနိုင်ရန် အားသွန် ကြိုးပမ်းလျက် ရှိသည်။
နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ဘဝသစ် ဖန်တီးမှုပြင်ဆင်
ထိုကြောင့် ဘာသာပြန် စာပေအသင်းနှင့် အစိုးရ ပညာရေး ဌာန၊ ကျောင်းသုံးစာအုပ် ထုတ်လုပ်မှု ညွှန်ကြားရေးဝန်ဌာနတို့ တွဲဘက်၍ ကျောင်းသုံးစာအုပ်များ ဘာသာပြန်ဆို ပြုစုရေးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြလေသည်။ ကျောင်းသုံးစာအုပ် ဌာနသည် ပြင်ပ ပညာရှင်များနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ကာ သက်မွေးမှု ပညာစာအုပ်များကိုလည်း ထုတ်ဝေခဲ့လေသည်။ယခုအခါ စာသင်ကျောင်းများနှင့် သက်မွေးမှုကျောင်းတို့တွင် စာပေဗိမာန်ထုတ် ကျောင်းသုံးစာအုပ်များကို သုံးစွဲလျက် ရှိကြောင်း တွေ့မြင်နေရလေပြီ။
စာအုပ်စာတမ်းများကို ပြုစုရာ၌ အကြောင်းရပ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် အထောက်အထား သေချာရမည်၊ စုံလင်ရမည်။ စာပေဗိမာန်ကဲ့သို့ စာပေကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသော ဌာနမျိုးတွင် ထုတ်နုတ်ကိုးကားနိုင်သည့် ရည်ညွှန်းစာကြည့်တိုက် ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် စာတည်းဌာန စာကြည့်တိုက်ကို အသင်းတည်ထောင်စကပင် ဖွင့်ခဲ့လေသည်။ စာတည်း ဌာနစာကြည့်တိုက်သည် စာအုပ်ကို ပြင်ပသို့ ငှားရမ်းခြင်းမပြု၊ ရုံးတွင်း၌သာ အသုံးပြုရသည့် ရည်ညွှန်းစာကြည့်တိုက် သက်သက်ဖြစ်ပေသည်။ တစ်ဖန် စာပေ ပြုစုရာ၌လည်းကောင်း၊ ဘာသာပြန်ရာ၌လည်းကောင်း ဝေါဟာရနှင့် အသံလှယ် စကားလုံးများ အညီအညွတ် ရှိရန်လိုအပ်လေသည်။ ထိုကြောင့် ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ်မှစ၍ ဝေါဟာရဘဏ် လုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့လေသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းအတွက် ဌာနသီးခြား ဖွင့်၍ ပညာရပ်အမျိုးမျိုးမှ ဝေါဟာရများကို စုဆောင်းခြင်း၊ ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်သူ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ၊ ပညာရှင် ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သော သုခမိန် အစည်းအဝေးများ၌ တင်ပြ၍အဆုံးအဖြတ် ယူခြင်း၊ ပညာရပ် အလိုက်ခွဲ၍ ကပ်ပြားတင်ခြင်း အစရှိသော လုပ်ငန်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရလေသည်။စာပေဗိမာန် ဝေါဟာရဘဏ်သည် အသင်းအကျိုးတစ်ခုတည်း အတွက် သက်သက်မဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်လည်း ဖြစ်ပေသည်။
တစ်ဖန် ၁၉၅၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် သုတေသနဌာနဟူ၍ ဌာနသစ်တစ်ခုတိုး၍ ဖွင့်ခဲ့လေသည်။ ထိုဌာန၏ လုပ်ငန်းမှာ ဘာသာပြန် စာပေအသင်းထုတ် စာအုပ်များသည် စာဖတ်သူ စာဖတ်လိုသူတို့အား ပညာပေးရာတွင် မည်မျှအောင်မြင် ထိရောက်သည်ကို အကဲဖြတ် လေ့လာရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာအုပ်ထုတ်ဝေမှု၌ အထိရောက်ဆုံး အခြေခံမူ တစ်ရပ်ကို စာအုပ်ထုတ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသူတိုင်းအတွက် စူးစမ်းလေ့လာရန် ဖြစ်လေသည်။သုတေသနဌာနသည် စာပေဗိမာန်ထုတ် စာအုပ်များကိုသာမက ပြင်ပပုံနှိပ်တိုက်တို့မှ ထုတ်သော စာအုပ်များကိုပါ ကျေးလက်တောရွာရှိ လူထုအား ဖတ်ရှုစေပြီးလျှင် ယင်းတို့၏ ထင်မြင်ယူဆပုံ၊ နားလည် သဘောပေါက်ပုံတို့ကို စနစ်တကျ လေ့လာသည်။ သာမန်အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန်စာပေအသင်းကို ဘာသာပြန် လုပ်ငန်းချည်းသက်သက် ဆောင်ရွက်နေသော အသင်းဟု အများကပင် ယူဆကြသည်။ ထိုသို့ကား မဟုတ်ချေ။ လူထု၏ပညာရေး တိုးပွားကောင်းမွန်လာမှုနှင့် ပညာတတ် အဆင့်အတန်း မြင့်တက်လာမှုကို ရှေးရှု၍ မြန်မာစာပေနှင့် မြန်မာအနုပညာရပ်များကို စူစမ်းရှာဖွေရန်၊ သို့မဟုတ် စူးစမ်းရှာဖွေမှုကို အားပေးရန်ဟူသော အချက်သည် ဘာသာပြန်စာပေအသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်ကို အသင်း၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေတွင် အတိအလင်းဖော် ပြပါရှိလေသည်။ ထိုကြောင့် ဘာသာပြန် စာပေအသင်းသည် မြန်မာစာပေ ထိန်းသိမ်းပျိုးထောင်မှု၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှုတို့ကိုလည်း အားပေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
စာပေဗိမာန်ဆုကို ခုနှစ်မျိုးခွဲ၍ ချီးမြှင့်ခဲ့လေသည်။ ထိုဆုခုနှစ်မျိုးမှာ ကာလပေါ်ဝတ္ထုဆု၊ သုတပဒေသာဆု၊ ဝတ္တုတိုပေါင်းချုပ်ဆု၊ ကဗျာပေါင်းချုပ်ဆုနှင့်ပြဇာတ်ဆုတို့ဖြစ်သည်။ ထိုဆုများကို ချီးမြှင့်ရန် ပြက္ခဒိန်နှစ် တစ်နှစ် အတွင်း ထုတ်ဝေသမျှ စာအုပ်စာတမ်းများကို အသင်းမှ စာပေဗိမာန်ဆု ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြရသည်။ထိုဆုရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့က ဆုချီးမြှင့်ထိုက်သည့် စာအုပ်အသီးအသီးကို ရွေးချယ်လေသည်။ ဆုငွေများမှာ ကာလပေါ်ဝတ္ထုဆုအတွက် ကျပ်ငွေ ၁…ဝဝဝ၊ ဘာသာပြန်ဆုအတွက် ကျပ်ငွေ ၇၅ဝ၊ စာပဒေသာဆုအတွက် ကျပ်ငွေ ၁…ဝဝဝ၊ သုတ ပဒေသာဆုအတွက် ကျပ်ငွေ ၁…ဝဝဝ၊ ကဗျာ ပေါင်းချုပ်ဆုအတွက် ကျပ်ငွေ ၁…ဝဝဝနှင့် ပြဇာတ်ဆုအတွက် ကျပ်ငွေ ၁…ဝဝဝ အသီးအသီး ဖြစ်သည်။ ကာလပေါ်ဝတ္ထုဆုကို ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှစ၍ ချီးမြှင့်ခဲ့လေသည်။ ( စာပေဗိမာန်ဆုရ စာအုပ်များ --- ။)
ထိုသို့ စာပေဆုများ ချီးမြှင့်သည့်အပြင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဟောပြောပွဲများကိုလည်း စာပေဗိမာန်က ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့လေသည်။ မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာရပ်များ မတိမ်ကော မပျောက်ပျက်စေရန်လည်းကောင်း၊ ထိုယဉ်ကျေးမှု အနုပညာရပ်များကို စူးစမ်း ရှာဖွေစုဆောင်းကြသော ပညာရှင်တို့ကို ချီးမြှင့် အားပေးရန်လည်းကောင်း၊ ထိုပညာရှင်တို့က တိုင်းပြည်လူထုအား ပညာအမွေပေးနိုင်ခဲ့စေရန် လည်းကောင်း ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှစ၍ စာပေဗိမာန် ယဉ်ကျေးမှု ဟောပြောပွဲများကို စတင်ကျင်းပခဲ့လေသည်။ ထိုဟောပြောပွဲများကို ပြည်လမ်း စာပေဗိမာန်ဝင်းအတွင်းရှိ လေဟာပြင် ဇာတ်ခုံတွင် ကျင်းပဟောပြောခဲ့သည်။ ဟောပြောချက်များကိုလည်း ယဉ်ကျေးမှုစာစဉ်အမည်ဖြင့် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခဲ့လေသည်။ ထိုပြင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်သော မြန်မာ့ဇာတ်သဘင်ကပွဲများကိုလည်း စီစဉ်ကျင်းပခဲ့လေသည်။ ထိုကပွဲများတွင် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့ ပန်တျာကျောင်း၊ မန္တလေးမြို့ ပန်တျာကျောင်းစသော အနုပညာ အဖွဲတို့မှ မြန်မာ့ သဘင်အနုပညာစွမ်းကို ဖော်ထုတ် ကပြခဲ့ ကြလေသည်။ နိုင်ငံခြားမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သော ဇာတ်သဘင် အဖွဲ့များကိုလည်း စာပေဗိမာန် လေဟာပြင် ဇာတ်ခုံ၌ ကပြစေခဲ့လေသည်။
ထိုနောက် စာပေဗိမာန်ထုတ် စာအုပ်စာတမ်းများကို တတ်နိုင်သရွေ့ အသုံးပြုကာ ပညာလိုလားသည့် အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့ကို ကျေးဇူးရှိစေမည့် ခေတ်မီပညာရပ်များ သင်ကြားပို့ချရန် ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပညာပြန့်ပွားရေး သင်တန်းများကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့လေသည်။ ထိုသင်တန်းများတွင် လူမှုရေး အခြေအနေပြောင်းလဲ တိုးတက်သည်နှင့်အမျှ ယင်းအခြေအနေနှင့် လိုက်လျောစွာ ကျင့်သုံးစေနိုင်ရန် ကမ္ဘာ့ရေးရာ၊ ဘောဂဗေဒ၊ စိတ်ပညာနှင့် လူမှုရေးရာ၊အုပ်ချုပ်မှုပညာ၊ သိပ္ပံပညာနှင့် လူ့လောက စသော အထွေထွေ ဗဟုသုတတို့ကို သင်ကြားပို့ချပေးလေသည်။ ထိုမျှသာမကသေး ဗဟုသုတဖြစ်စေသော စာအုပ်များကို ဈေးအသက်သာဆုံးနှုန်းဖြင့် စာပေဝါသနာပါသူများထံသို့ ရောက်စေရန် အဓိကအားဖြင့် ရည်ရွယ်လျက် ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့မှအစပြု၍ စာပေဗိမာန်စာအုပ် အသင်းကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စာအုပ် အသင်းဝင်များသည် တစ်နှစ်လုံးအတွက် ငွေတစ်ဆယ်ထည့်ရုံမျှဖြင့် လစဉ်နောက်ဆုံးထုတ် ငါးမူးတန် ပြည်သူ့လက်စွဲ စာအုပ်နှစ်အုပ်၊ လေးလတစ်ကြိမ် တစ်ကျပ်တန်ပြည်သူ့လက်စွဲ နောက်ဆုံးထုတ်တစ်အုပ် စုစုပေါင်း တစ်ဆယ့်ငါးကျပ် တန်ဖိုးရှိသော စာအုပ်များကို အိမ်တိုင်ယာရောက် ရရှိ၍၊ ထိုစာအုပ်များ စာအုပ်ဆိုင်များသို့ မရောက်မီ ဦးဦးဖျားဖျား ဖတ်ရသည့် အခွင့်အရေးရရှိသည်။ ထိုပြင် အခါအားလျော်စွာ စာပေဗိမာန်မှ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသည့် အချို့ စာအုပ်များကိုလည်း မေတ္တာလက်ဆောင်အဖြစ် ရရှိသည်။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်အထိ စာအုပ်အသင်းဝင်ပေါင်းမှာ ၄၈၁ဝ ဖြစ်၏။ သတင်းစာသည် တိုင်းပြည်ကို ရှေ့ဆောင်သည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေသည်။ ထိုကြောင့်ပင် သတင်းစာကို တိုင်းပြည်၏ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဟု ဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်။ စာပေဗိမာန်သည် သတင်းစာ လောကကို တိုင်းပြည်၏ အားကိုးအားထား ဖြစ်စေလိုသည့် ဆန္ဒဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာ ဆရာများ အသင်းနှင့် ပူးတွဲ၍ သတင်းစာ သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့လေသည်။ ပထမအကြိမ် သတင်းစာ သင်တန်းကို ၁၉၅၆-၅၇ ခုနှစ်အတွင်းက ဖွင့်ခဲ့လေသည်။ ထိုသင်တန်းများတွင် သတင်း ထောက်လှမ်းနည်း၊ သတင်း တည်းဖြတ်နည်း၊ သတင်းစာဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ပုံပြ သရုပ်ဖော်နည်း၊ ကြော်ငြာလုပ်ငန်း၊ ကမ္ဘာ့ သတင်းစာသမိုင်း စသည့် ပညာရပ်များကို ပို့ချပေးခဲ့လေသည်။ ဈေးနှုန်းသတင်း ယူနည်း၊ ရဲနှင့်သတင်းစာ ဆက်ဆံရေး ပညာတို့ကိုလည်း သင်ကြား ပို့ချခဲ့သည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ဘာသာပြန် စာပေအသင်းကို စတင်တည်ထောင်ပြီးနောက် ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှစ၍ စာအုပ်များကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် စာပေဗိမာန်၌ ပုံနှိပ်စက်မရှိခဲ့ချေ။ စာအုပ်များကို ပြင်ပပုံနှိပ်တိုက်များတွင် အပ်နှံ၍ ရိုက်နှိပ်ခဲ့ရလေသည်။အသင်းပိုင် ခေတ်မီပုံနှိပ်ဌာနတစ်ခု တည်ထောင်ရန် ရည်မှန်းချက်ရှိသည့် အလျောက် ၁၉၄၉-၅ဝပြည့်နှစ် အတွင်းက တစ်ပတ်ရစ် စက်ကြီးနှစ်လုံးနှင့် စက်ကလေးတစ်လုံးကိုဝယ်ယူ၍ စာပေဗိမာန် ပုံနှိပ်ဌာနကို တည်ထောင်ခဲ့လေသည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ချန်ဒလာပုံနှိပ်စက် သုံးလုံးကို မှာကြား ဝယ်ယူခဲ့လေသည်။
၁၉၅၆ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂယူနက်စကိုအဖွဲ့၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ရောက်ရှိလာသော စာအုပ် ထုတ်လုပ်ရေး ပါရဂူ၏ အကြံပေးချက်အရ စာအုပ် ထုတ်လုပ်မှုဌာနဟူ၍ စာမူတစ်ခုမှ စာအုပ်တစ်အုပ်အဖြစ်သို့ ရောက်သည်အထိ ဆောင်ရွက် ရသော ဌာနတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့လေသည်။ ထုတ်လုပ်မှုဌာနအောက်တွင် စက်ရုံဌာနခွဲ၊ ပန်းချီနှင့်သရုပ်ဖော်ဌာနခွဲ၊ တန်ဖိုးတွက် ဌာနခွဲဟူ၍ သီးခြားဌာနခွဲများ ရှိလေသည်။ စက်ရုံဌာနခွဲတွင် လက်စာစီစက်စာစီဌာနစိတ်၊ ဗလောက်ဌာနစိတ်၊စက်ရိုက်ဌာနစိတ်၊စာအုပ်ချုပ် ဌာနစိတ် စသည်ဖြင့် ဌာနစိတ် အသီးသီးရှိသည်။ စက်ရုံဌာနခွဲသည် စာမူကို စာအုပ်အဖြစ်သို့ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရသော ဌာနခွဲဖြစ်သည်။ စက်ရုံဌာနခွဲကို စက်ရုံမှူးက အုပ်ချုပ်ရလေသည်။ ပန်းချီနှင့် သရုပ်ဖော်ဌာနခွဲသည် စာမူကို စာအုပ်အဖြစ်ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေရာ၌ ထိုစာအုပ်ကို မျက်စိပသာဒရှိအောင်၊ ဖတ်သူ၏ စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်အောင်၊ ဖတ်ရှုရာတွင် လွယ်ကူစေအောင် တန်ဆာဆင်ရသောဌာန ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ စာအုပ်ကို တန်ဆာဆင်ရာ၌ သရုပ်ဖော်ရုပ်ပုံ၊ ဓာတ်ပုံများ ထည့်သွင်းရသည်။ ထိုပြင် ဆိုင်ရာရုပ်ပုံ၊ ဓာတ်ပုံကို စာအုပ်နှင့် သင့်လျော်အောင် အထားအသို ပြင်ဆင်မှုတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ရလေသည်။ စက်ရုံဌာနခွဲ၊ ပန်းချီနှင့် သရုပ်ဖော်ဌာနခွဲတို့က စာမူကိုစာအုပ်အဖြစ်သို့ ရိုက်နှိပ်ပေးရုံဖြင့် လုပ်ငန်းပြီးဆုံးပြီဟု မဆိုနိုင်သေးချေ။ ထိုစာအုပ်ကို ဖြန့်ချိရောင်းချ ရပေဦးမည်။ ထိုကြောင့် စာအုပ်တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ရမည်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို တန်ဖိုး သတ်မှတ်နိုင်ရန် ကနဦးကပင် စာအုပ်အပေါ် ကုန်ကျမည့် စရိတ်ကို တွက်ချက်ခဲ့မှ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုဌာနတွင် တန်ဖိုးတွက် ဌာနခွဲတစ်ခု ထားရှိရလေသည်။
စာပေဗိမာန် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၏ အဓိက တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးအတွက် ပညာဗဟုသုတ တိုးပွားစေရန်၊ နိုင်ငံခြား စာပေများမှ ကောင်းနိုးရာရာတို့ကို သုတေသန ပြု၍ စာပေအဖြစ် ပြုစုရန်၊ ပြုစုပြီး စာပေတို့ကို မြန်မာဘာသာသို့လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းဘာသာ တစ်ခုခုသို့လည်းကောင်း ပြန်ဆို၍ စာအုပ် စာတမ်းအဖြစ် ပုံနှိပ်ရန်၊ ထိုပြင် အစိုးရ၏ မူဝါဒနှင့် ကိုက်ညီသည့် အစိုးရအသိအမှတ်ပြု ကျောင်းသုံးစာအုပ်များကို ပုံနှိပ်၍ ပြည်သူလူထုအတွက် ဈေးအသက်သာဆုံးနှုန်းထားဖြင့် ရောင်းချဖြန့်ချိရန်တို့ဖြစ်သည်။ ဦးစွာ၌ ပြန်ကြားရေးဌာန ဒု-အတွင်းဝန် ပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးဝန်နှင့် စာပေဗိမာန် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ ပါဝင်သော ယာယီထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီက စာပေဗိမာန် အုပ်ချုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းအရပ်ရပ်တို့ကို လွှဲပြောင်းထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့လေသည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့မှအစပြု၍ စာပေဗိမာန် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ ထိုအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင် ကိုးဦးပါဝင်၍ ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံတော်လှန်းရေး အစိုးရအဖွဲ့ ပြန်ကြားရေး ဌာနတာဝန်ခံက သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီးလျှင် စာပေဗိမာန် အုပ်ချုပ် ရေးမှူးက အဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်လေသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း&oldid=448328" မှ ရယူရန်
၂၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၀၉:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၀၉:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။